Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iindaba » eTurboNews ligama elibi lokuphawula: Nantsi isizathu
Iindaba zeManyano • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • HITA • LGBTQ • iintlanganiso • iindaba • abantu • Cinezela iZaziso • Umanyano • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iiwayini kunye neMimoya • I-WTN
eTurboNews ligama elibi lokuphawulwa. Imbali yolu papasho luphambili lwehlabathi lujolise kushishino lokuhamba, indlela yokuphila, kunye namalungelo oluntu yodwa kwaye yaqalwa eIndonesia.
Kwi-1999-2001, i-DMC Bloody Good Stuff phantsi kobunkokeli bukaJuergen Steinmetz kunye noMelanie Webster bamele i-Indonesia Tourism e-United States naseKhanada.
Oku kwalungiselelwa kunye nowayesakuba nguMphathiswa weNkcubeko noKhenketho wase-Indonesia, twasweleka uMhlonishwa. Ardika evela Bali.
Omnye wemicelimngeni ngelo xesha yayiyeyezobupolitika kwaye yaphumela kwizilumkiso zokuhamba ezazivela eUnited States ngokuchasene neRiphabliki yaseIndonesia.
Ngo-2000, kumnyhadala we-TIME wokhenketho e-Jakarta, u-Juergen Steinmetz wawongwa ngembasa yeempumelelo ezikhethekileyo kuKhenketho lwase-Indonesia nguMongameli wase-Indonesia kumsitho omkhulu ePlaza Indonesia.
Ngelo xesha icandelo likarhulumente lalingalithembi icandelo labucala, kwaye necandelo labucala lalingamthembi urhulumente. I-Bloody Good Stuff yaqala iBhunga lase-Indonesia laMahlakani oKhenketho ukuhlanganisa ishishini.
I-ICTP yayijonge indlela engabiziyo yokujongana neearhente zokuhamba zase-US ukufundisa icandelo malunga nejografi yase-Indonesia. Oku kwakuyimfuneko ukufumana umyalezo ukuba iingxaki eJakarta azichaphazeli ukhenketho eBali umzekelo.
I-Intanethi yayikwiminyaka yosana, kodwa uninzi lweearhente zokuhamba sele zinee-imeyile, ezinye zineewebhusayithi.
U-Juergen Steinmetz ubambisene neeHotele zase-eTurbo eziseSingapore ezisekelwe e-eTurbo njengomxhasi waza waqalisa incwadana yeendaba yokuqala yoshishino lohambo lwamazwe ngamazwe esebenzisa ifomathi yeQela likaYahoo. Kwabizwa eTurboNews, eqonda umxhasi.
I-eTurboHotels yayiyinkampani yokuqala yohlobo lwe-Expedia. Babeneendawo ezininzi zewebhusayithi ezifana ne-sheraton.id okanye i-hilton.id kwaye banikezela ukwakha iwebhusayithi yasimahla yeenkampani zokuhamba zase-Indonesia. Imodeli yokwenza imali yayikukuhlawulisa ikhomishini yokubhukisha kwi-intanethi.
Ngoncedo lweshishini lokuhamba kunye nokhenketho lwase-Indonesia, oku eTurboNews Iqela leYahoo likhule ngokukhawuleza.
Amanye amaqela, afana neQela lee-ASEAN TOURISM DISCUSSION Group, azisa iinkokeli kumacandelo abucala kunye noluntu asuka kumazwe ase-ASEAN ukuze axoxe ngentsebenziswano yezokhenketho. Uninzi lwamalungiselelo angoku ngaphakathi kokhenketho lwase-ASEAN lube nesiqalo kule ngxoxo.
IQela leNtetho laseHawaii libe lithuba lentengiso-esimahla leearhente zokuhamba ukuze zinxibelelane neehotele kunye nabanye ababoneleli abaseHawaii kwaye batshintshiselane ngezimvo, indumiso, kunye nokugxeka. Ngo-2002 eTurboNews, yaxelelwa ngu Igunya lezokhenketho laseHawaii (HTA) ukuba amagumbi okuncokola kwi-Intanethi akanalo ixesha elizayo, kwaye bebengayi kucinga ngokuxhasa loo ngxoxo.
Ngeli xesha, eTurboNews waqala inani leebhlogs ezidumileyo ezibandakanya iMeetings, Aviation, Wines, GayTourism, TravelIndustryDeals, WorldTourismWire, kunye Iindaba zaseHawaii.kwi-Intanethi incoma amajelo ayo eendaba zoluntu.
eTurboNews ukuthengiswa kwandiswa ehlabathini lonke, yaye amanqaku anokubonwa epapashwe kwiHindustan Times yaseIndiya phakathi kwamanye amaninzi.
eTurboNews yaba sisixhobo esitsha sohambo kunye nolwazi lokhenketho olwakhula ngokukhawuleza kweminye imimandla yehlabathi. eTurboNews yatshintsha ifomathi ukusuka kwiQela leYahoo ukuya kwezinye iifomathi ze-imeyile ezininzi, yazimela kwi-Indonesia ngo-2001, kwaye imidiya yokuqala ezimeleyo kwi-intanethi yecandelo lohambo nokhenketho yaqaliswa.
Kwiminyaka engama-22 kamva, eTurboNews kusahleli ukuba yimali yokwenyani.
eTurboNews yayiyincwadi yokuqala yehlabathi epapashwa rhoqo ngeyure 24/7. Kuphela kocingo oluzimeleyo nolwehlabathi jikelele kushishino lokhenketho kunye nokhenketho olunomxholo onezimvo umntu anokuwufumana kuphela kwi-eTN.
Ngababhalisi be-imeyile be-imeyile ye-230,000 + yokuhamba, ukuhanjiswa kwe-imeyile ngoku kuphela malunga ne-10% yokufunda ngokubanzi.
Abadibanisi beendaba ezibandakanya uGoogle kunye neeNdaba ze-Bing, iiNdaba eziNgqongileyo, imidiya yoluntu, kunye nezaziso ezityhalayo zonyuse ukubonakala eTurboNews kakhulu kwiminyaka.
Kunyaka ophelileyo, ikomkhulu laseHawaii eTurboNews kusekwe iiwebhusayithi ezingama-92 ezizimeleyo ezinemilinganiselo yazo kunye ne-SEO ukukhuthaza umxholo ngeelwimi ezingama-92 kwihlabathi liphela. ISpanish, isiJamani, isiFrentshi, isiTshayina, isiArabhu, isiHindi, isiSwahili, isiPhuthukezi, nesiTaliyane ngabona baphambili ngoku kubafundi abangengabo isiNgesi.
Ngaphezulu kwezigidi ezi-2 zabafundi baseMelika abakhethekileyo abavulayo eTurboNews amanqaku, iUnited States lelona qela likhulu labaphulaphuli, lilandelwa yi-UK, iJamani, i-Indiya, neKhanada.
okwangoku, eTurboNews ibonwa kumazwe nemimandla engama-238. Owona mmandla umncinci useAntarctica unomfundi omnye, kwaye akwaziwa ukuba ngubani lo mfundi mnye.
Izixeko ezinkulu apho eTurboNews inokufumaneka eFrankfurt, eWashington, eLondon, eNew York, naseDuesseldorf.
eTurboNews lilungu elisekwayo IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika, i Umanyano lwaMazwe ngaMazwe lwaBalingani bamaKhenketho, kwaye i Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi, kwaye yaseka ezimeleyo Umbutho wezoKhenketho eHawaii ekuphenduleni owayesakuba Hawaii Talk Yahoo Group.
eTurboNews uhlala esekelwe e-Honolulu, eHawaii, eU.SA, kunye nomsebenzi ozimeleyo e-Duesseldorf, eJamani, kunye nababhali abazimeleyo kumazwe angama-128.
eTurboNews uhlala eyinkokeli engenakuphikiswa kwaye ephambili kwingxelo ezimeleyo yoshishino lokuhamba kunye nokhenketho lwehlabathi, indlela yokuphila echukumisayo, imfashini, amalungelo oluntu kunye neminye imixholo enomdla.
Xa i-COVID-19 yahlasela ilizwe lezokhenketho, eTurboNews kunye nePATA, iBhodi yezoKhenketho yaseNepal, kunye neBhodi yezoKhenketho yaseAfrika yaseka i Ukwakha kwakhona iqela ngoMatshi ka-2020 ecaleni komboniso worhwebo orhoxisiweyo we-ITB eBerlin, eJamani.
Eli qela lavela kwi Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi enamalungu ngoku ali-128 kumazwe.
Emva kwe257 yeengxoxo zokwandisa ezidumileyo, eTurboNews kunye neWorld Tourism Network ikwazile ukugcina ishishini lohambo nokhenketho kunye neenkokheli zalo zimanyene kwaye zisebenzisana.
kunye Umthombo philayo, eTurboNews yaqala itshaneli yayo yokuqala ye-24/7 yevidiyo yeendaba zehlabathi, i Umboniso weNdaba ezaphukileyo, kunye ne-eTV. Abafundi banokubona iividiyo ze-ETN kunye neengxoxo zexesha lokwenyani zidlala kuzo zonke eTurboNews iiwebhusayithi, amaqabane okuthengisa, kunye neqela lamaqonga.
Oku kuhambelana nokhetho olubanzi lwe-eTN Podcast. Onke amanqaku amatsha kwi eTurboNews ngoku ingafundwa, imanyelwe njengepodcast, kwaye ibukelwe njengevidiyo kwi Ijelo likaYouTube lika-eTN kunye oamaqonga aziwayo.
Amazwe kunye nemimandla apho eTurboNews iyabonakala:
Mzantsi Afrika: 54,047
UMzantsi Korea: 10,887
IHong Kong: 8,117
EZambia: 7,159 XNUMX
EZimbabwe: 6,501 XNUMX
EBangladesh: 5,598 XNUMX
I-Trinidad neTobago: 4,196
ENepal: 3,289 XNUMX
EMongolia: 2,429 XNUMX
EKhambodiya: 2,040 XNUMX
IRiphabhlikhi yaseDominican: 1,734
EMantla eMakedoni: 1,660
I-Bosnia neHerzogovina: 1,145
IAntigua & Barbuda: 1,023
Iziqithi zase-Virgin zase-US: 718
I-St. Kitts & Nevis: 688
Iziqithi zeCayman: 659
eCote d'Ivoire: 597
KwiiSolomon Islands: 477
EMazantsi eSudan: 396
I-Vincent kunye neGrenadines: 366
El Salvador: 302, XNUMX, XNUMX
Ukudibana kwakhona: 292
Iziqithi zaseBritish Virgin: 196
ICaribbean Netherlands: 149
IAmerican Samoa: 93
eSt. Martin: 91
INew Caledonia entsha: 80
Iziqithi zaseMantla Mariana: 57
IEquatorial Guinea: 51
ETimor Leste: ngama-50
Iziqithi zeFaroe: 48
ISan Marino: 36
IFrench Guiana: 33
Iziqithi zaseCook: 30
IRiphabliki yaseMbindi Afrika: 29
I-St. Barthelemy: 29
ISt. Helena: I-19
Isiqithi soMntu: 16
Iziqithi zaseMarshall: 16
Intshona yeSahara: 14
Iziqithi zaseFalkland: 11
Iziqithi zaseAland: 5
uMmandla woLwandlekazi lwaseBritane: 3
UMntla Korea: 3
I-Svalbard kunye noJan Mayen: 3
Iziqithi zaseNorfolk: 2
I-St. Pierre kunye ne-Miquielon: 2
Izixeko ezikhulu apho eTurboNews iyabonakala:
IWashington DC: 76,605
ELos Angeles, CA: 43,524
eHouston, TX: 22,178
EBoston, MA: 21,072
UCharlotte, NC: 20,006
IFunchal, eMadeira: 19,494 XNUMX
IDubai, iUAE: 18,771
Alanda, GA: 18,654
EPhoenix, AZ: 18,419
EDar es Salaam: 14,464
ISan Francisco: 13,713
EToronto: 13,452 XNUMX
EColumbus, OH: 13,053
Portland, OKANYE: 12,923
ESydney: 12,919 XNUMX
ENashville, TS: 11,064
IsiXeko saseQuezon: 11,126
EMinneapolis, MN: 10,915
eBirmingham, AL: 10,159
UMlan: 9,469 XNUMX
IsiXeko saseKansas, MO: 8,848
I-Springfield, MO 7,024
Umphathi webhodi: 6,854
IsiXeko saseSalt Lake, e-UT: 6,682
ELusaka: 5,671 XNUMX
EPittsburgh: 4,921 XNUMX
IsiXeko sase-Oklahoma, KULUNGILE: 4,830
EAthene: 4,423 XNUMX
eLincoln, NE: 3,173
ENewark, NJ 3,020
Ulwandle lwe-Ewa, HI 2,914
ENew Orleans, LA: 2,877
Isixeko saseHo Chi Minh: 2,869
Ulwandle lwaseMyrtle: 2,857
Molo, HI: 2,852
UMichael oNgcwele: 2,819
Tulsa, KULUNGILE: 2,584
ILittle Rock, AR: 2,483
EUlan Baatar: 2,380 XNUMX
Boise, i-ID: 2,335
ISanta Rosa: 2,319
IiNgxangxasi zaseSioux: 2,216
ESaint Petersburg: 2,171
IKorali yaseKapa: 2,117
Eugene, OKANYE: 2,098
IsiXeko saseJersey, NJ: 2,065
USanta Clara: 2,050
Petersburg: bali-1,897 XNUMX
IPhnom Penh: 1,867
Imithombo yaseSaratoga: 1,725
IMountain View: 1,705
UPawulos oNgcwele: 1,668
IsiXeko saseMexico: 1,661 XNUMX
USanta Clarita: 1,633
eTurboNews yinxalenye ye InkohIzIyamaHele. Amanani amaninzi afikelelekayo kwi eTurboNews Ku fu maneka travelnewsgroup.com/reach.